U diyaar garowga Erciyes Xilliga Cusub | RayHaber | raillynews
[20 / 01 / 2020] U ogolow Vangölü Wharf Beach iyo Wharf Ferry Park Go Public Again	65 Van
[20 / 01 / 2020] Muwaadiniintu waxay dhahaan 'Ya Kanal Or Istanbul' to Kanal Istanbul Report EIA	34 Istanbul
[20 / 01 / 2020] Ha ilaawin kalluunka Badda Marmara haddii Canal Istanbul	34 Istanbul
[20 / 01 / 2020] Ima casuumin Munaasabadda Airportmamoğlu ee Maddaarka Istiraatiijiyadda Magaalada Ray Kaynak	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia38 KayseriErciyes diyaarinta xilliga cusub
05 / 12 / 2018 38 Kayseri, Gobolka Central Anatolia, GUUD, TURKEY, TELPHER
Erciyes ayaa isku diyaarinaya xilli ciyaareedka cusub
Shirkii qorshaynta waxaa lagu qabtay Erciyes ka hor xilliga qaboobaha. Kulanka waxaa ka soo qaybgalay degmada caasimadda iyo sidoo kale maamulayaasha hay'adaha dawliga ah ee khuseeya. Erciyes Inc. Guddoomiyaha iyo Maareeyaha Guud Murat Cahid Cıngı, Erciyes ayaa ku dhawaaqay inay qorsheynayaan inay furaan xilliga qaboobaha ilaa iyo bartamaha bisha.
Erciyes, oo noqotay xarun dalxiis oo jiilaal oo heer caalami ah iyada oo maalgelinta degmada Kayseri ee caasimadda, ayaa isku diyaarinaya xilli-ciyaareedka cusub si loo furo maalmaha soo socda. Ku xigeenka Xoghayaha Guud ee Degmada Hanti-dhowrka, Madaxda qaybaha la xiriira, Erciyes Inc., Wadooyinka, Agaasinka Caafimaadka Gobolka, Gendarmerie iyo AFAD ayaa ka qaybgalay shirkii qorshaynta ee la qabtay kahor xilli cusub. Inta lagu guda jiro kulanku, ra'yiga ayaa laga beddelay tallaabooyinka la qaadi karo si looga hortago wixii dhibaato ah xilliga xagaaga.
Macluumaadka ku saabsan kulanka iyo xiliga cusub Erciyes Inc. Guddoomiyaha iyo Maareeyaha Guud Murat Cahid Cıngı, sanad kasta bilowga xilli ciyaareedkan iyada oo lala kulmayo hay'adaha berrinka hawlaha ee Erciyes ayaa sheegay in ay isku diyaarinayaan kulanka jiilaalka. Cyngı ayaa sheegay in ay taxadar ka muujiyeen bilowga xilliga xagaaga ee ku saabsan dhibaatooyinka laga yaabo inay dhici karaan xilliga jiilaalka, waxayna yidhaahdeen: dhammaan Dhammaan qaybaha degmooyinka caasimadda, wadooyinka, hay'adaha caafimaadka gobolka, AFAD iyo Gendarmerie Erciyes waxay bixiyaan adeeg fara badan. Maqnaanshaha malaayiin qof oo ku nool gobolka ayaa waxay u baahan yihiin adeegyo badan oo ka socda amniga bulshada si caafimaadka loo helo. Kulankan, waxaan u qeybineynaa waajibaadka iyo isweydaarsiga fikradaha. Erciyes dhamaan hay'adaha dawlada waa la ilaaliyaa, qof walbana wuxuu muujinayaa dadaalkooda ku aaddan martigeena inooga yimaado Erciyes nabad ah, ku raaxee wakhti fiican. Waxaan bilaabay in aan marti-galinno dalxiisayaal badan oo ka kala yimid adduunka oo dhan Erciyes. Sidaa daraadeed, xaaladdan ayaa inooga dhigaysa inaan ka taxadarno adeegyada ku saabsan kaabayaasha iyo kor-u-qaadista. Waxaan u shaqeyneynaa martidayada nooga imaanaya dibadda si ay uga hadlaan goobta marka ay soo noqdaan. "
Xilliga jiilaal nabad ah. Murat Cahid Cıngı, waaxyo baraf ah oo macmal ah oo samaynta wadiiqooyinka ugu muhiimsan diyaar u ah inay furaan xilliga cusub ilaa laga gaaro bartamaha bishan Erciyes.
Erciyes 100 Waxay diyaarineysaa Dalxiisayaal Ruush ah
Isu diyaarinta xilliga Erciyes Ski
Suuqa Siinta Turkiga ee Suuqa Silicon Valley wuxuu ku maalgashaday $ 38 Million inuu keeno
Tuzla Şifa-Çayırova Xiriirinta Buundada Isku xirka Shaqada ayaa sii socota